Taariikhda My Butros » 5 Ma ee ituso Successful Dating Online
Shukaansi Online waxa uu noqday mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan lagula kulmo dad cusub. Shukaansi Online, sida wax kale, waxay leedahay dhibcood ay fiican iyo kuwa xun. Sidaas sida aad u guul naftaada u samayn kartaa? Maqaaladani waxay muujinaysaa 5 samayn oggolyahay iyo waxa kaa caawin doona inaad maraan online shukaansi yar oo dheeraad ah si habsami.
Of: Ku buuxi profile shukaansi ah
Waxa muhiim ah in aad ka jawaabto su'aalaha ku jira profile shukaansi ah. Tani waa fursad ay dadka ugu horeysay u hesho si aad u barato yara adiga kugu saabsan. Ma aha in aad u sheegto sheekada noloshiisa oo dhan, laakiin aadan rabin in la siiyo ugu yaraan laba qof oo xaqiiqooyin muhiim ah. In ay aniga igu saabsan qaybta sheegid aad doonayso inaad ku sheeg haddii aad shaqayso ama aad aado dugsiga, waxa aad jeceshahay in aad waqtigaaga dheeraadka ah, iyo xusin wax xoogaa gaar ah oo aad dajisaa ka dadka kale marka laga reebo. Ma waxa aad tabaruci ee jikada maraq ah laba jeer bishii? Ma ka tirsan tahay kooxda buugga in kaliya akhriya Classics ah? Waxaa sheeg! Waxay u muuqato wax yar si aad u, laakiin qof akhrinaya profile waxay kaa caawin doontaa in aad dadka kale ka taagan.
Ha: Hadal ku saabsan rajada iyo riyada aad u xiriir
Waa wanaagsan tahay in la xuso in aad raadineyso weeyna xiriir caadi ah, ama wax ka badan oo muddo dheer ah. Waxaad doonaysaa in aad la kulanto qof wax la mid ah waxa uu doonayaa. Haddii aad bilowdo hadalka ku saabsan sida aad u wada ku qaataan marka hore aad Christmas, nooca aroos aad la riyoodaan oo ah, ama sida badan carruurta aad rabto in aad leedahay, aad ku socoto in lagu cabsiiyo taariikhaha iman kara off. Iska daa hadallada Teleefan ee khuseeya ka dib marka aad ka sii daran.
Of: Add photos dhawaan
Waxaa laga yaabaa inaad door bidaan sawirka si aad ah loo qaaday saddex sano ka hor seeraha dhigayey warkeedu aad dareento, laakiin waxaa muhiim ah in la isticmaalo sawirka more dhawaan. Dadka isu beddesho muddo inkasta oo laga yaabo in aad ku doodi aad weli eegto oo aad u badan sida sawirka in jir. Midabka Timahaagu, dhererka, iyo qaabka ay ku beddeleen. Laga yaabaa in aad hoos ugu dhacay ama ku dhejiyey a pounds yar. Xitaa aad style shakhsi isbedeli karta. Haddii aad boostada sawir iyo kulmi qof qof, aad u ogaato waxa ay la filaya qof ee sawirka. Ka fikir sida aad dareemi lahayd haddii qofka aad la kulanto ilaa lahaa photo jir laba sano oo uu lahaa timo yar oo ah caloosha yar yar. Waxa aanu samayn dadka maqaar saar si ay u doonayaan in ay ogaadaan cidda ay la kulmeysa.
Ha: Sug aad u dheer in ay la kulmaan
Sites shukaansi Online waxay noqon kartaa meel fiican oo lagu kulmo dad cusub, laakiin waxay u badan tahay ma doonayo in xiriirka ay si online joogo muddo bilo ah oo ku saabsan dhamaadka. Waa muhiim in aad xiriir cusub oo ka online in in qofka. Marka aad is dhaafsadeen emails iyo qoraallada aad u guuri kartaa in tallaabada xigta, kaas oo la hadlaya taleefanka. Haddii aad dareemaysid xidhiidhka ka oo aad rabto inaad la kulanto, sameeyaan taariikh! Haddii aad u fog ku nool oo aan kaliya ka eryi kartaa in aad la kulantid midba midka kale, ugu yaraan Skype ilaa aad awoodo.
Of: Kalsoonow mindhicirka
Haddii aad u hesho dareen funny ku saabsan qof sababta oo ah wax uu sheegay ama iyada oo samaynaya asalka baaritaan aad wax uusan laakiin wuxuu helay, aamini dareen in. Waxaad su'aalo ah oo ku saabsan sida xaqiiqada ah weydiisan kartaa, laakiin haddii aad weli dareemayaa wax ka baxsan yahay, waxaa la gaarey waqtigii dib u lana kulmaan dad kale. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay ku qaataan bilowga xiriirka cusub habaynta been iyo xaqiiqooyinka iyo si joogto ah u yaabsan haddii wixii uu ku soo socda afkiisa ka soo baxay uu yahay been ah. Had iyo jeer aamin dareen mindhicirka aad.
Shukaansi Online had iyo jeer ma noqon doonto masaafo siman. Waxaad samayn doonaa qaladaad roon waqti danbe.
Online Wadahadal Dating Mawduucyada ee 100% Success
Maxaad Tall Girls taariikh Guys oo gaaban
Iska Noqoshada a Professional Online Dater